Romantic Tanabata, ịhụnanya na nkwanye ugwu-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Romantic Tanabata, ịhụnanya na nkwanye ugwu
N'ụbọchị Tanabata, enwere ọmarịcha akụkọ ịhụnanya: akụkọ banyere Cowherd na Weaver Girl.
Akụkọ mgbe ochie nwere na n’oge ochie, e nwere otu onye na-achị ehi, ndu ya dị ezigbo njọ. Nwanne ya nwanyị na-emesi ya ike mgbe niile. Otu ụbọchị, nwanna nwanyị ahụ nyere ya ehi itoolu, ka ọ kpọghachite ehi iri mgbe ọ lọtara na mgbede. Onye na-elekọta ehi anyị nwere ezigbo mwute, nọ ọdụ n’elu ahịhịa na-ebe ákwá.
N'oge a, biara ka ehi Chineke, gwa onye na-azu ehi ahu: "have gha igbanwe akara aka gi, i ghaghi igho mmiri, enwere akuko, ya bu ada nke onye Empero. osimiri dị ka ehi Chineke wee chọta Nwee Uwe Ala. Ha hụrụ n'anya n'anya nke mbụ. The Weaver Girl achọghị ịlaghachi na mbara igwe ma lụọ onye na-elekọta ehi. Mgbe ha lụsịrị, ha abụọ biri ezigbo obi ụtọ. Ha mụrụ ụmụ abụọ.
Kaosinadị, mgbe Emperor mara ihe na-eme n’etiti ha, iwe were ya nke ukwuu ma ziga mmadụ ka ọ gbute akụkọ ifo ahụ. Ọ na-ewute onye na-azụ ehi nke ukwuu. Chineke ehi gwara ya ọzọ: can nwere ike ime m na akpụkpọ ahụ n'ime akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ, na
jiri akpụkpọ ụkwụ a ị nwere ike ịga eluigwe. Dika ntuzi aka nke ehi ochie ahu si di, Cowherd mere akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ na ihe eji ehi ehi, na-eburu ụmụ ya abụọ wee na-aga elu igwe site na nzọụkwụ.
Mana mgbe ndị Cowherd hụrụ Nwanyị Ukpa ahụ, Nwanyị Nwanyị ahụ pụtara na mberede. Ofeere n’ikuku site n’iji ihe eji ọla ọcha mee wee ghọọ osimiri, kewara ndị nche ehi na Nwa Ahịhịa n’akụkụ abụọ. Ha abụọ enweghị ụzọ ọnụ, ha nwere ike lewe onwe ha anya n'ofe Osimiri.
N’ikpeazu, mmetuta ndi mmadu abuo kpaliri ihe anwuru, ma ndi nchuputa ugwu guzobere akwa ha abuo na abali asaa nke asaa n’ime onwa Julai n’afọ obula, ha abua nwere ike izukota n’elu akwa ahu. A na-akpọ akwa mmiri a magpie bridge.
Akụkọ banyere Cowherd na Weaver Girl, nke nwere ịhụnanya na oge gboo, gosipụtara ntụgharị na ntụgharị nke ịhụnanya na-adịghị ada ada, na-egosipụta ntụgharị uche nke ndị mmadụ maka ịhụnanya na iguzosi ike n'ihe nye ịhụnanya. Akụkọ nke Cowherd na Weaver Girl, anyị kwenyere na n'akụkụ abụọ nke Osimiri Tianhe, ndị Cowherd na Nwanyị Na-akpa ákwà ejirila nwayọ na-echekwa ibe ha. Ha na-ahụkarị mmụọ bara uru nke "Ndụ dị oké ọnụ ahịa na ọnụahịa nke ịhụnanya dị elu", nke na-akpali mkpebi siri ike na obi ike nke ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ịchụso ịhụnanya mara mma!
Ihe niile ga - adị mma, jack ga - enwe jill.
Previous: Adọkpụtagharị Adịlị na Wheel Spacer
Ọzọ: Mbido nke Mgbụsị akwụkwọ